Warbixin :44-kun Reer Itoobiya ah oo Sanad walba U dhinta Cudurka Halista ah Ee Kansarka.
Wednesday April 13, 2016 - 08:28:15 in Wararka by Super Admin
Xaalado liita ayaa lagasoo sheegayaa gudaha wadanka Itoobiya oo kamid ah wadamada ugu faqrisan bariga qaaradda Afrika.
Abaaro iyo cudurro ayaa halakeeyay malaayiin qof oo reer Itoobiya ah xilli xukuumadoodu ay dagaal calooshood u shaqeystanimo ah uga jirto dalka muslimka soomaaliya.
Wasaaradda caafimaadka Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in afartameeyo kun oo reer Itoobiya ah ay sanad walba u dhigtaan cudurka Kansarka ah oo si aan horay loo arag ugusii dhax faafaya bulshada dhaxdeeda.
Cabdullaahi Kunuuz oo ah lataliyaha wasaaradda caafimaadka islamarkaana madax ka ah mashruuca ka hortagga cudurka Kansarka ayaa wakaaladda wararka Turkiga u sheegay in 44-kun oo Itoobiyaan ah ay sanad walba u dhintaan cudurka Kansarka isagoo saadaaliyay in sanadkan ay dhimashadu 50-kun oo qof gaari karto.
%5.8 ayay gaartay nisbada dhimashada cudurka kansarka sanad walba dalka Itoobiya, dhaqaatiirta caafimaadka waxay sheegeen in daryeelo xumo ay u dhinteen kumanaan qof kadib markii ay daawo taya leh ka waayeen xarumaha dowladda.
Wasaaradda caafimaadka Itoobiya ayaa ka sheeganaysa hoos udhac dhanka miisaaniyadda dowladda oo ku aaddan arrimaha caafimaadka.
Hay’adda caafimaadka Q.Midoobe WHO ayaa saadaalisay in 13 milyan oo Itoobiyaan ay cudurka Kansarka u dhintaan marka lagaaro sanadda 2030-ka.
Dadka ugu badan ee cudurka Kansarka uu ku laayay Itoobiya waxay da’doodu ka yartahay 75 waana dhimashadii ugu ballaarneed ee Kansarku ka geysto Itoobiya.
Dhinaca kale malaayiin qof ayaa la sheegay in ay xaalad halis ah kunoolyihiin gobollada kala duwan ee wadanka Itoobiya kadib markii ay abaaro ku habsadeen.
Itoobiya ayaa wajahaysa xaalad adag,madaxweynaha Mareykanka Obama oo sanaddii lasoo dhaafay booqday magaalada Addis Ababa ayaa ballan qaad been ah ufidiyay madaxda wadankaasi iyadoona la ogyahay in ciidanka Itoobiya ay sida eeyaha oo kale ugu shaqeeyaan reer galbeedka kadib markii ay duullaan gardarra ah ku qaadeen soomaaliya halkaasi oo ay xasuuq daran ka geysanayaan.